Wararka - Teknolojiyada cusub ee DTS celceliska nadiifinta isku-dhafka uumiga iyo hawada
DTS taageere uumi cusub oo ku wareegaya dib-u-celinta nadiifinta, tiknoolajiyada ugu dambeysa ee warshadaha, qalabka waxaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan oo baakado ah, oo aan dili doonin dhibco qabow, xawaaraha kuleylka degdegga ah iyo faa'iidooyinka kale.
Kiliinka jeermiska lagaga dhaliyo ee nooca fanku uma baahna in uumi looga baxo. Wareegtada marawaxaddu waxay jebin kartaa cufnaanta qaboojinta hawada, waxayna ku qasbeysaa uumiga inuu ku socdo marinka hawada, wuxuuna sameeyaa wareeg is barbar socda farqiga u dhexeeya saxanka cuntada, si ay uumiga qashinku u dhaqaaqo, iyo kuleylka gelitaanka cunnadu waa ka dhakhso badan tahay, saameynta ay ku leedahay jeermiska dhalmada waa mid isku mid ah. Inta lagu jiro howsha nadiifinta, looma baahna kululeyn, taas oo badbaadinaysa waqtiga ugu horeeya ee kululaynta waxayna aad u gaabinaysaa waqtiga jeermiska.
Nidaamka kuleylka iyo nadiifinta kuleylka ee jeermiska dhalmada biyo ma isticmaalo, umana baahna uumi kulul si loo kululeeyo geeddi socodka biyaha, taasoo badbaadin karta in badan oo ah isticmaalka tamarta uumiga iyo isticmaalka tamarta biyaha.
Taageeraha hawo-qaboojinta ee hawo-celinta jeermiska ka dhasha ee nooca fanku wuxuu ku qasbi doonaa uumiga in lagu dhajiyo dhammaan badeecadaha min gees ilaa gees kale, taasoo dabooleysa dhammaan alaabooyinka, had iyo jeerna ku hayso wareegga uumiga dib-u-celinta si looga dhigo nadiifin la'aan baro qabow.
Dib-u-celinta jeermiska dhalista ee nooca fanku wuxuu leeyahay xakameyn badan oo cadaadis iyo heerkul ah, waa la qaboojin karaa cadaadiska gadaal, wuxuuna leeyahay codsiyo ballaaran. Waxaa lagu dabakhi karaa dhammaan alaabada jeermiska looga fogeeyo heerkulka sare sida baakadaha jilicsan, dhalooyinka, gasacadaha, cuntooyinka fudud, iyo wax soo saarka hilibka.